Warqad Cad: Sidee U Fiirsashada otomaatiggu u kordhaa sicirada beddelashada | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 24, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Si cusub loogu soo geliyay halkayada Maktabadda Cad (waxaa ku shaqeeya Warqad wadaag) waa daabacaad loogu talagalay loona sameeyay Iibka by our hay'adda. Warqadda cad waxaa loo yaqaan, Maxaad ugu Baahan Tahay Nidaamka Iibinta Iibinta.
Iibka waxay diirada saareysaa dareenkooda sagxadda masafka iibka. Shirkadaha leh hannaanka iibinta ee dibadda, waa halka ay u horseedaan shaqaalahooda iibka inay dabagal ku sameeyaan.
Dhibaatada ay muujisay Salesvue ayaa ah in inta badan ganacsiyada ay kaga tagayaan lacag dhan miiska miiska sababo dhowr ah awgood:
Kooxaha iibku ma haystaan ​​a nidaamka otomaatiga raadinta iibka taas oo awood u siinaysa inay ku abuuraan waxqabad ku filan rajada ay qabaan.
Kooxaha iibku badanaa waxay leeyihiin sharciyo caqli-gal ah oo ka joojiya wicitaan ku saabsan rajo goor hore.
Kooxaha iibku badanaa waxay joojiyaan wicitaanka fursadaha qandaraaska ugu faa'iidada badan uguna weyn iyadoo la joojinayo xiriirka rajada muhiimka ah.
Salesvue waxay ogaatay in macaamiisha ay ku kordhin karaan dhaqdhaqaaqa 50% uguna badalna ugu yaraan 20% marka raadinta otomaatiga lagu dabaqo kooxaha iibka Waa tan sida ay tirooyinku u egyihiin:
Tags: SaadaalinqalabayntaiibintaWarqad cad
Sida Loo Abuuro Fikradaha Mawduuc ee Macaamiil Cusub
Nov 27, 2013 at 2: 20 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida qoraalkan, tan aniga ayey ii anfacaysaa. Fadlan sii wad wadaagida macluumaadkaaga noocyadan ah, waana iska cadahay, waad ku mahadsan tahay dadaalkaaga!